August 2014 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
ဓာတ်ပုံဆရာ တစ်ယောက်သည် သူ့သူငယ်ချင်းလင်မယားက ဖိတ်သဖြင့် ညစာထမင်းသွားစားသည်။ ကင်မရာကိုလည်းတစ်ပါတည်းယူသွားသည်။ ထို့နောက်ညစာစားရင်း ဓာတ်ပုံ အနည်းငယ်ရိုက်ပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက် သူငယ်ချင်း မိန်းမက သူ့ကင်မရာမှ ပုံများကိုယူကြည့်ရင်း ဟာ ပုံတွေကလှလိုက်တာ ရှင့်ကင်မရာကောင်းလို့နေမှာနော်။
ငယ်ငယ်ကတည်းက စကားစပ်တိုင်း မေမေ ဆုံးမခဲ့တဲ့ စကားတစ်ချို့ ရှိခဲ့တယ်။
`` သားရေ... မြဲမြဲ မှတ်ထားဖို့က လူဆိုတာ အမြဲ အလုပ်လုပ်နေရမယ်... အသက်အရွယ်အရ သင့်လျော်တဲ့ အလုပ်ပေါ့.... ကိုယ့်အတွက်၊ မိသားစုအတွက်၊ သူတစ်ပါးအတွက်၊ ဖြစ်နိုင်ရင် တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုး ရှိတဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်ကိုလုပ်နေရမယ်..
ငါးမိနစ်ခန့်သေဆုံးခြင်း
ထိုင်းနိုင်ငံ နကော်ရစီမှား ပြည်နယ်မှ ဘုန်းကြီးကျောင်းတခုအတွင်း သင်္ခါရ တရားကို ကိုယ်တိုင်တွေ့ ကြုံခံစားနိုင်ဘို့တကယ့်အလောင်းကောင်အား အသုဘဈာပန စီရင်သည့် ပုံစံ ပြုလုပ်၍ ခေါင်းတလားအတွင်း ငါးမိနစ်ခန့် ဝင်ရောက်ကာ သေခြင်းအရသာကို ခံစားနိုင်ပါတယ်။
ပရဟိတသမား နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်
Author: lubo601 | 7:06 PM | No မှတ်ချက် |
P Nanda Myaing
ပရဟိတလုပ်တယ်ဆိုတာ တန်ပြန်မမျှော်လင့်တတ်ပါဘူးဆိုပေမဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ချီးကျူးသံ သာဓုသံလေးတွေကိုတော့ ပရဟိတသမားအများစု လိုချင်တတ်ကြပါတယ်။ စိတ်ရောကိုယ်ပါ နှစ်မြုတ်ပြီး အပင်ပမ်းခံ လုပ်ထားခဲ့ပြီးမှ ရလာတဲ့အကျိုးဆက်က စိတ်ဆင်းရဲရတာမျိုးတော့ မဖြစ်ချင်ပါဘူး။ ၀မ်းပမ်းတသာနဲ့ပဲ ကြည်နူးနေချင်တာပါ။
ပရဟိတသမား အများစုဟာ တခါတခါ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အမနာပ ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချသံအချို့ကို မမျှော်လင့်ဘဲ ကြားသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်မကိုက်ဘဲ စိတ်ပျက်သွားစေတဲ့အထိ ယိုင်နဲ့သွားတတ်ကြပါတယ်။
ပရဟိတလုပ်နေကြတဲ့ လူငယ်မောင်မယ်လေးတွေကို ဘုန်း P ဆရာသမား မိန့်ဖူးတာလေး ဖောက်သယ်ချချင်ပါတယ်။ ပရဟိတရဲ့ အကျိုးပေးဆိုတာတဲ့။ ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့သူဆီကနေ တိုက်ရိုက်ကြီး ပြန်ရမှာတော့ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ အခြားတစ်ယောက်ယောက်ဆီကနေ မလွဲမသွေ ပြန်ရတတ်တယ်တဲ့။ သတိထားပြီး စောင့်ကြည့်ပါတဲ့။
ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်နေသည့် အသက် (၃၀) အောက်
လူငယ်တွေဟာ ယနေ့ခေတ်မှာ ထိုင်မနေကြတော့ပါဘူး။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကို တွေးတောကြံဆရင်း သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပုံဖေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ သူတို့မှာအတွေ့အကြုံအရ ဝါနုနေပေမဲ့ မကြောက်မရွံ့ဘဲနဲ့ ပုံသေ ရေရှည်စီးပွားရေးပုံစံထဲက ခွဲထွက်ပြီးတော့ နည်းပညာကို အခြေခံတဲ့ ချဉ်းကပ်မှုအသစ်အဆန်းကိုအသုံးပြုပြီး စီးပွားရေးနယ်ပယ်ထဲမှာ လူငယ်တွေဝင်ရောက်လာကြပါတယ်။
Zaw Min Latt August 31, 2014 at 5:35am
ရေးမယ်မထင်နဲ့နော်..။ ကျနော်လည်း မတက်ဘူး ဗျ။ ကျနော်ရေးသားတင်ပြမှာက စနစ်တကျသုံးတက်ဖို့နဲ့ ရေရှည်ခံအောင် အသုံးချပုံချနည်းတွေ သိသလောက်လေး တင်ပြပေးမှာပါ။
ကင်မရာအမြင့်တွေကိုင်တွယ်တဲ့ ၀ါသနာရှင်တွေ ၊ ပညာရှင်တွေမှာ
ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ ၀ယ်ယူသုံးစွဲရတာ ဈေးလည်းမသေးလှပါဘူး။ တစ်ခုခုဖြစ်တိုင်းလည်း ချက်ခြင်းမ၀ယ်နိုင်ပါဘူး။
တာဝန်အရဆောင်ရွက်သည့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကို ရိုက်နှက်သူအား အရေးယူထား
တောင်ကုတ်လမ်း၌ဖမ်းမိသည့် ဘင်္ဂါလီ ၂၉ ဦး သံတွဲတွင် ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထား
အော်ရီဒူးမှ အင်တာနက်အသုံးပြုခ 1 MB လျှင် ၁ဝ ကျပ်နှုန်းအထိလျှော့ချ
အောင်ပန်းမြို့ ဗုံးပေါက်မှု တလကျော်ပေမယ့် တရားခံမပေါ်သေး (ရုပ်/သံ)
ဆိုင်ကယ်ဆီဖြည့်စဉ် အင်ဂျင်အပူပေါ်သို့ ဆီများကျရာမှမီးလောင်မှုဖြစ်
ပါကစ္စတန်မှာ ရဲနဲ့ ဆန္ဒပြသူကြား အဓိကရုဏ်းဖြစ်
အရက်ပြဿနာ ထိန်းဖို့ အခွန် တိုးကောက်မလား
တိုင်းကြီးနှစ်တိုင်းက လယ်သိမ်းခံ တောင်သူတွေ ဆန္ဒပြ
လမ်းလျှောက်နေသူများကို ယာဉ်တိုက်ခံရ၍ (၁)ဦးသေ၊ (၁)ဦးဒဏ်ရာရ
အသေးစားနှင့်အလတ်စား ဆန်လုပ်ငန်းရှင်များ အများပိုင်ကုမ္ပဏီစုဖွဲ့ရန် ဆန်စပါးအသင်းအကြံပြု
အခန်းပိတ်လှောင် နှိပ်စက်ခံနေရသည့် အိမ်ဖေါ် အလုပ်သမငယ် တစ်ဦးအား ကယ်ထုတ်
တခါတုန်းက အောက်ပြည်အောက်ရွာတွင် အထက်အညာသားများကို အထင်အမြင်သေး၍ ဘာမျှမသိနားမလည်သူများဟု ယူဆထား သောဆရာတော်တစ်ပါးရှိလေသည်။ ထိုသတင်းကိုအထက်အညာမှ ဦးပဉ္ဇင်းတစ်ပါးကြားသိရလျှင် မခံချင်လှ၍ ထိုဆရာတော် အား ချေပ ပြောဆိုရန် အကြံထုတ်ပြီး သွားရောက်တွေ့ဆုံလေသည်။
Author: lubo601 | 1:52 PM | No မှတ်ချက် |
တရုတ်တွေဖျောက်ထားတဲ့ရာဇ၀င် ဒါပေမယ့် အနောက်တိုင်းကတော့သိတယ် ဒို့ဗမာတွေလဲသိတယ်
ရှည်လျား ကျယ်ပြောသော နယ်နိမိတ်ထိ စပ်မှုသည် မြန်မာပြည်နှင့် တရုတ်ပြည်အကြား နှစ်ပရိစေဒ ကြာမြင့်စွာ ပြသနာ အလျည်းမရှိပဲ ခွဲခြားတည်ရှိခဲ့ပါသည်။
မင်မင်းဆက် (၁၃၈၀-၁၃၈၈ အေဒီ) လက်ထက်တွင် တရုတ်တို့သည် ယူနန် နယ်အား ၄င်းတို့၏ နယ်နိမိတ် အဖြစ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သွမ်းသွင်းနိုင် ခဲ့သည်။ တောင်ငူခေတ် ၁၅၅၇ ခုနှစ်တွင် ဘ်ုရင့်နောင်မင်းတရားကြီးသည် ရှမ်းကျိုင်းရုံးကြီးနယ်(ယနေ့ခေတ် ကချင်/ရှမ်း/ကယားနယ်) များအား သိမ်းပိုက်အောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော်ငြားလည်းဒေသခံစော်ဘွားများသည် နယ်ချင်းထိစပ်နေသောတရုတ်ယူနန် ဘုရင်ခံနှင့် မြန်မာ နေပြည်တော်ထံသို့ နှစ်ဘက်စလုံးအားအခွန် အတုပ်များပေးဆောင်ကာ ၄င်းတို့၏ ပဒေသရာဇ် အုပ်ချုပ်မှုအားဆက်လက်တည်တံ့အောင်ကြီုးစားခဲ့ကြသည်။
#Digital Camera တစ်လုံးဝယ်ယူရာတွင် သတိပြုသင့်သည့် အချက်(၁၀)ချက်
Zaw Min Latt August 30, 2014 at 8:12am
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာ ဆိုတာကြီး လည်း ပါဝင်နေတာ မိတ်ဆွေတို့လည်း သိကြမှာ
ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်မှာ အလှူလေးလုပ်တာကအစ..သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အလှူ၊မင်္ဂလာဆောင်
စတဲ့ ပွဲလမ်းသဘင်များမှာ လက်စွမ်းပြချင်တာ မိတ်ဆွေများလည်းတွေးမိကောင်းတွေးမိကြမှာပါ။
ဒါဆိုရင် Digital Camera တစ်လုံးကိုဘယ်လိုဝယ်ယူကြမလဲ…?
ကျနော်လေ့လာထားတာလေးတွေတော့ ရှိပါတယ်။ အကောင်းဆုံးနည်းနာများကို
လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ပါတယ်..။ နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် Comment လေးပဲဖြစ်ဖြစ်. .ပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ဝေဖန်ရေးလည်း လုပ်သွားနိုင်ပါတယ်..။
နိုင်ငံတော်ဗဟိုအဆင့် ပိုစတာပြိုင်ပွဲမှာ ပထမဆုနှစ်ခါရရှိခဲ့တဲ့ ပန်းချီဆရာမ မခိုင်သဇင်ထက်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Author: lubo601 | 1:50 PM | No မှတ်ချက် |
YoYarLay added5new photos — with Artist KhaingThazin Htet.
ကျွန်မက ပန်းချီဆွဲနေရရင် စိတ်ချမ်းသာတယ်
ပန်းချီပညာမှာ ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ မခိုင်သဇင်ထက်နှင့် ရိုးရာလေးမှ တွေ့ဆုံခဲ့ ပါတယ်။ မခိုင်သဇင်ထက်ဟာ ငယ်စဉ် ကလေးဘဝ အရွယ် ကတည်းက ပန်းချီပညာကို ဝါသနာပါခဲ့ပြီး ယခုလည်း ပန်းချီ ပညာဖြင့် သူမ၏ နေ့ရက်တွေကို ဖြတ်ကျော်နေပါတယ်။
U Toe Aung
" ဦးထိန်ဝင်း ဘာဖြစ်လာပြန်ပြီလဲ ..... "
ဆေးခန်းထဲဝင်လာသော ဦးထိန်ဝင်းအား ကျွန်တော်က မေးလိုက်သည်။
" ခေါင်းမူးတယ် ဆရာရယ်...." ဟုပြောပြီး လူနာခုတင်ပေါ် တက်လိုက်သည်။
" ကျွန်တော့်မိန်းမ အိမ်ပေါ်က ဆင်းသွားတာ ခုထိပြန်မလာသေးဘူးဆရာ ရင်ထဲမှာလည်း
အလုံးကြီးတစ်လုံးဆို့နေသလို တစ်ဆို့ဆို့ကြီးဖြစ်နေတယ်.... ....ကလေးသုံးယောက်
နဲ့ ကျွန်တော့်ကိုထားခဲ့ပြီး ထွက်သွားတယ်။
“ဘယ်သွားလုပ်လုပ် ဒီလောက်တော့ ရတာပါပဲ..။”
Author: lubo601 | 1:40 PM | No မှတ်ချက် |
ဒီနေ့ Labor Market ထဲက စကားပါ..။ အလုပ်အကိုင်ဈေးကွက်လို့ ဘာသာပြန်တာထက် စာရင် လေဘာမားကက် လို့ တိုက်ရိုက်မွေးစားလိုက်တာက ပိုပြီး ဆွေးနွေးလို့ ကောင်းပါတယ်..။ အလုပ်ရှင်အတော်များများဟာ ကိုယ့်လုပ်ငန်း.. ကိုယ့်အုပ်စု.. ကိုယ့်ကုမ္ပဏီကို နိုင်ငံတကာ စံချိန်မီ ဖြစ်ချင်လာကြပါပြီ..။ သိပ်ကောင်းပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် ခက်နေတာက အဲဒီနိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်း ဆိုတာကိုပဲ တိုင်းတာတဲ့ ပေတံတွေ အမျိုးမျိုး ရှိနေကြတာပါပဲ..။ အဲဒီလို ပေတံ အမျိုးမျိုး ရှိနေတဲ့ အထဲက တူတာလေးတွေ ဆွဲထုတ်ပြရရင်..
ကိုယ့်ဝန်ထမ်းတွေ တူညီဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ သပ်သပ်ယပ်ယပ် ဖြစ်ချင်ကြတယ်..။
(ဒါပေမယ့် ကိုင်တွယ်ပုံထိန်းသိမ်းပုံ မတတ်တော့ တူညီဝတ်စုံသာ ရှိတယ် .. တယောက်နဲ့ တယောက် မတူကြဘူး..။)
ကိုယ့်ဝန်ထမ်းတွေကို အလုပ်ကောင်းကောင်း လုပ်စေချင်ကြတယ်..။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပကတိအခြေအနေများနှင့် ထူးခြားသော ၀ိသေသများ
Author: lubo601 | 1:14 PM | No မှတ်ချက် |
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိပစ္စုပ္ပန် ပကတိအခြေအနေများကို လေ့လာကြည့်သောအခါ
(၁) နိုင်ငံသားအများစုသည် လုပ်ခလစာ ၀င်ငွေနိမ့်သော၊ အလုပ်အကိုင် အတည်တကျ မခိုင်မာသော၊ ငွေကြေးစုဆောင်းနိုင်မှု နည်းပါးသော၊ အခြေခံလူတန်းစားနှင့် သာမန်လူတန်းစားများ ဖြစ်နေခြင်း။
Author: lubo601 | 9:38 AM | No မှတ်ချက် |
ရန်ကုန်လူဦးရေ အများဆုံး၊ အနည်းဆုံး ကယားပြည်နယ် – လ၀ကညွှန်မှူး ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုး
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လူငယ်မျိုးဆက်များတွေ့ဆုံပွဲ ကျင်းပ
ဒုက္ခသည်စခန်းမှ ရေမျော ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အလောင်းအား ပြန်လည်တွေ့ရှိ
SIM ကဒ်များကို နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ လက်လီ အရောင်းဆိုင်များ တွင် ဝယ်ယူရရှိ နိုင်တော့မည်
ပအိုးဝ်နဲ့ SSA တပ်များအကြား နယ်မြေအငြင်းပွားမှုဖြစ်ပွား
နမ္မတူမြို့ နယ်၊ မန်စံကျေးရွာ SNLD ရုံးဖွင့်လှစ်
ရခိုင်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီး(၅)ဦး ရာထူးအပြောင်အလဲ နောက်ကွယ်မှ အကြောင်းအရာများ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ထုတ်ဖေါ်ပြောကြား
ရန်ကုန်မြို့သစ် စီမံကိန်းကို ကျေးရွာဒေသခံတချို့ လက်မှတ်ရေးထိုး ကန့်ကွက်မည်
အစ္စလာမ် စစ်သွေးကြွတွေ တိုက်ခိုက်မှု တနေ့ ဒေါ်လာ ၇ သန်းခွဲ ကုန်ကြောင်း ပင်တဂွန်ပြော
Senegal မှာ ပထမဆုံး အီဘိုလာရောဂါ ကူးစက်သူတွေ့
ကျောက်မျက်လုပ်ငန်း ပိတ်ဆို့ခံရမှု စုံစမ်းအဖြေရှာဖို့ရှိ
Author: lubo601 | 4:08 AM | No မှတ်ချက် |
သတို့သားနဲ့ သတို့သမီးတို့ မိဘတွေ၊ ဒေါပွ နေကြလေရဲ့။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ၀ါမ၀င်မီ ကပ်ပြီး ဖုတ်ပူမီးတိုက် မင်္ဂလာဆောင် ပေးကြရတာ။ ဒါပေမဲ့ လာရောက် ချီးမြှင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို မြို့ရဲ့အထင်ကရ ဟော်တယ်မှာ ခမ်းနားစွာ ဧည့်ခံရတယ်။ အဆင်ပြေတယ်။ ဒံပေါက်ကျွေးပြီး ရေခဲမုန့်ပါ ထပ်ဆင့် ကျွေးမွေးတယ်။ အဆင်ပြေတယ်။ ခြုံငုံ ပြောရရင် (စောင်၊ ပုဆိုး ခြုံပြီး ကွမ်းငုံသည်ကို မဆိုလိုပါ။) အားလုံး အဆင်ပြေတယ်။ Butသို့သော်လည်း ကမ်းတဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းက အဆင်မပြေဘူး။
Author: lubo601 | 4:07 AM | 1 Comment |
ရန်ကုန်မြစ်၊ ပဲခူးမြစ်၊ ပုဇွန်တောင် ချောင်းဆုံရာ မြစ်ဝတွင် ဓမ္မစေတီမင်း၏ ကောင်းမှုတော် ခေါင်းလောင်းကြီးကို သြဂုတ်လ ၉ ရက် ကတည်းက စတင် ရှာဖွေနေသည်မှာ ယနေ့ဆိုလျှင် ရက်ပေါင်း ၂၀ ရှိပြီ ဖြစ်သည်။
ထိုခေါင်းလောင်အား ဦးဆောင်ရှာဖွေသူ ဦးစံလင်း (မြေပုံ) ၏ ကြေညာပြောဆိုချက်ကို ကိုးကားပြီး အစိုးရပိုင် မီဒီယာများ ဖြစ်သည့် မြန်မာ့ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာများ အပါအ၀င် ပုဂ္ဂလိက သတင်း မီဒီယာများတွင် ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းကြီး တွေ့ပြီဟု ရေးသားဖော်ပြကြသည်။
မေမြတ်နိုးကို ဘာလို့ သရဖူ သိမ်းတာလဲ
Author: lubo601 | 4:06 AM | No မှတ်ချက် |
မြန်မာ အလှမယ် မေမြတ်နိုးကို Miss Asia Pacific World သရဖူ ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းလိုက်တာဟာ နှစ်ဘက် သဘော တူညီချက်တွေကို ချိုးဖောက်ခဲ့လို့ ဖြစ်တယ်လို့ ပွဲစီစဉ်သူတွေ ဘက်က ပြောဆိုပြီး မေမြတ်နိုးကို အပြစ်ပုံချခဲ့ ပါတယ်။
"ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ဧ၀ရတ်တောင်အကြောင်း တစေ့တစောင်း
(၁) ဧ၀ရတ်တောင်ကို မည်သည့်တောင်တက်သမားမျှ မတက်ရောက်ခဲ့သော နောက်ဆုံးနှစ်မှာ ၁၉၇၄ ခုနှစ်ဖြစ်သည်။
(၂) ၁၉၇၈ခုနှစ်တွင် Reinhold Messner သည် အဖော်ဖြစ်သူ Peter Habeler နှင့်အတူ ဧ၀ရတ်တောင်အား အောက်ဆီဂျင် ဗူးမပါဘဲ ပထမဆုံးအကြိမ်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ် နှစ်နှစ်အကြာတွင် Messner သည် အောက်ဆီဂျင်ဗူးမပါဘဲ တစ်ဦးတည်း ထပ်မံတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ ပြန်သည်။
(၃) ၁၈၅၆ ခုနှစ်တွင် အနားယူသွားပြီဖြစ်သည့်အပြင် ယင်းတောင်ထိပ်ကို မြင်ပင်မမြင်ဖူးခဲ့သော ဝေလလူမျိုး ဆာဗေးတိုင်း တာရေး အကြီးအကဲ George Everest ကို ဂုဏ်ပြု၍ ဧ၀ရတ်တောင် (Everest Mt.) ဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။
(၄) ဧ၀ရတ်တောင်ထိပ်ပေါ်ပထမဆုံးခြေချခဲ့သော Edumund Hillary သည် သားဖြစ်သူ Peter Hillary နှင့် အတူ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် ယင်းတောင်ကို ထပ်မံတက်ရောက်ရာ ထိုသို့တက်ရောက်သည့် ပထမဆုံးသော သားအဖအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သည်။
# ယောင်္ကျားတို့ သဘာဝ ။
အချိန်ကတော့ ဆောင်းအကုန် နွေအကူးကာလ နေ့လည်ပိုင်း အချိန်အခါလေးမှာပေါ့ဗျာ။
ဆံပင်ညှပ်ဆိုင် တစ်ဆိုင်မှာ "ဆံသဆရာ" နဲ့ "ဆံပင်ညှပ်သူ" နှစ်ဦး ဆံပင်ညှပ်ရင်း ထွေရာလေးပါး ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်း ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာဆိုင်ရှေ့နေပူ ကျဲကျဲမှာ လေပွေ လေရူးလေး တစ်ချက် တိုက်ခတ်လိုက်ပြီး ဖုန် နဲ့ အမှိုက်တွေဟာ လေပွေလေရူးနဲ့အတူ လွင့်ပျံ တက်နေတာကို ကြည့်ရင်း ဆံပင်ညှပ်ဆရာက ပြောလိုက်ပါတယ်။
Author: lubo601 | 3:27 AM | No မှတ်ချက် |
Mayyu Tun's status update.
Mayyu Tun added2new photos.
Author: lubo601 | 3:22 AM | No မှတ်ချက် |
တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များအနီး တည်းခိုခန်းများမရှိဟု ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ပြော
မုံရွာတွင် ကျောင်းသား ၁၀၀ ကျော် ဆန္ဒပြ
အညာက ဘုရားပွဲနဲ့ ရွေ့ပြောင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြတဲ့ လူငယ်တွေအကြောင်း (အသံဖိုင်)
ရှေးဟောင်း ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် ခိုးယူသူများအား စုံစမ်းဖော်ထုတ် အရေးယူထား
မြန်မာနိုင်ငံသား ၄ ဦးအား လူသတ်မှုများဖြင့် ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးပြီ
ကလေးငယ်၏ လည်ပင်းတွင် ဆွဲထားသော ရွှေဆွဲပြား ဖြတ်ယူ သွားသူကို ဖမ်းဆီးရမိ
လွိုက်ကော်မြို့ နယ်မှာ ဆိုင်​ကယ်​ သူခိုးနှင့်​ ဆိုင်​ကယ်​(၇)စီးဖမ်းဆည်းရမိခြင်း
သစ်တောပြုန်းတီးမှုကာကွယ်ရန် လှေကားထစ်စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာစတင်
ဥရောပ အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားဆု ရော်နယ်ဒို ရရှိ
မောင်ကောင်းဇံမရ ဂျပန်နာမည်ကြီး ကလပ်အသင်းကြီးနှင့် ၃ နှစ်စာချုပ်မည်
Author: lubo601 | 5:15 AM | No မှတ်ချက် |
စင်္ကာပူက MRT လို့ ခေါ်တဲ့ မြို့ပတ်ရထားပေါ်မှာ ဦးစားပေးခုံတွေ ရှိတယ်။
ကိုယ်ဝန်သည်၊ မသန်မစွမ်းသူ နဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို ဦးစားပေးရတဲ့ ထိုင်ခုံတွေပေါ့။
အဲဒီခုံတွေ လွတ်နေရင်ထိုင်၊ ဦးစားပေးရမယ့်သူတွေလာရင် ထပေး။ ဒါပဲ။
ခက်တာက... တချို့လူကြီးတွေက သူတို့လာလို့ ထပေးရင် မကြိုက်ဘူးဗျ၊ သူတို့ကို အသက်ကြီးတယ်လို့ အထင်မခံနိုင်တာ။
Tint Swe's status update.
Tint Swe added2new photos.
1. ဆရာ တို့ဆေးဆိုတာလဲ သိချင်ပါတယ်။ ဗန်ကောက်မှာ မြန်မာတွေကို အဲလိုလုပ်ပြီး ဒေါ်လာတွေ ယူသွားတယ်လို့ သတင်းကြားရလို့ပါ။
2. Burundanga ဆိုတဲ့အရာဟာ တို့ဆေးများလား။ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် အဘယ်ကဲ့သို့သော အရာမျိုးပါလဲ။ ဆေးဝါး ရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေများ မေးမြန်းဝယ်လို့ရပါသလား။ ရခဲ့ရင် အဘယ်ကဲ့သို့ အသုံးပြုရပါသလဲ။ လူကို အန္တရာယ် ဖြစ်စေပါသလား။
BMW ရဲ့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး AK47 ကျည်မဖောက် X5 SUV ကား
Author: lubo601 | 5:09 AM | No မှတ်ချက် |
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး AK47 စက်သေနတ်ရဲ့ ကျည်မဖောက်နိုင်တဲ့ ကား အဖြစ် BMW ဟာ X5 အမည်ရ SUV ကားနဲ့ စံချိန်တင် ထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ AK47 သေနတ်ပြင်းအား အပြင် အခြားသော ပေါက်ကွဲမှု ဒဏ်များကိုပါ ခံနိုင်ရည်ရှိမယ့်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ BMW X5 Security Plus လို့အမည်ပေး ထားပြီး မော်စကိုမြို့ မော်တော်ယာဉ် ပြပွဲတစ်ခုမှာ တရားဝင်ထုတ်ဖော် ပြသခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
#(၁) မိန်းမတို့ အကြောင်း
အိမ်နီးနားချင်း အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီး (၂)ယောက် ဈေးအသွားလမ်းမှာ တွေ့ကြရင်း စကားရပ်ပြောနေကြပါတယ်။ ဈေးက ပြန်လာတဲ့ မိန်းမနာမည်က ဒေါ်ဝ ၊ ဈေးကို သွားနေတဲ့ မိန်းမက ဒေါ်လှ ဆိုပါစို့။
ဒေါ်လှ ။ ။ ဟော ၊ မ၀တို့တော့ ဈေးတောင် ပြန်လာပြီ။ ကျွန်မကတော့ ခုမှ ဟန်ပြင်တုန်း။ ဒါထက် စကားမစပ် မနေ့ညက ဘာဖြစ်ကြတာတုန်း။ ညသန်းကောင်ကြီး ဆူလို့ညံလို့ . . . ရှင်တို့အိမ်ဖက်က ။
မြန်မာစကားပုံတစ်ခုအကြောင်းပြောပြချင်တယ်။ ``မိအေး နှစ်ခါနာတယ်`` ဆိုတာ ကြားဖူး ပြောဖူးကြမယ်ထင်တယ်။ မိအေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး နောက်ထပ်စကားပုံတစ်ခုက ``မိအေးအော်တာသာ လူသိတယ် ဂဏန်းညှပ်တာ လူမသိဘူး`` တဲ့။
ရှေးကတည်းက မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ စကားပြောရင် စကားပုံနဲ့ အခိုင်းအနှိုင်းလေးနဲ့ ဝေဝေဆာဆာ ပြောတတ်ကြတယ်။ ရသမြောက်သလို တကယ်လဲဆိုလိုရင်းကို ပိုတွင်ကျယ် စေပါတယ်။ စကားပုံဖြစ်ပေါ်လာပုံသာ မသိတော့ရင်သာ မသိမယ် အသုံးတွင်ကျယ်ဆဲဖြစ်တဲ့ မိအေးနှစ်ခါနာ ရတဲ့အကြောင်း ပြောပြမယ်။ မူကွဲတွေလည်း အများကြီးရှိချင်ရှိမယ်နော် ။ ကျွန်တော်သိတာပြောပြတာ။ ခေါင်းစဉ်အတိုင်း ပေါက်တတ်ကရ ပုံပြင်ပဲမှတ်ပါ။ ကိစ္စ တစ်ခုထဲနဲ့ နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်နစ်နာတဲ့အခါမှာ ``ဟုတ်ပ --- သူ့မှာ မိအေးနှစ်ခါ နာရတယ်``လို့ပြောတတ်တယ်မဟုတ်လား။
မနေ့က ငါးရံ.ခြောက် ထုတ်ပြီးရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်နဲ့ ဖေ့ဘုတ် မှာ စကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ ငါးရံ့ခြောက်မှာလဲ ပိုးသတ်ဆေး တမျိုးဖြစ်တဲ့ ၉၀% ယင်ဆေးခဲ (သူတို့အခေါ်၉၀%ယင်မနားဆေး) ကိုတွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးနေကြပြီတဲ့။ စားသောက်ကုန်တွေကို စစ်ဆေးတဲ့ FDA အဖွဲ့က ဒါတွေကိုမသိဘူးလား။
ရန်ဖြစ်နေစဉ် ၀င်ရောက်ဖြန်ဖြေသူ တူမီးသေနတ်ထိမှန်၍ ဒဏ်ရာရ
ဂိုဏ်ဃဏဆန်ဆန် မင်းမဲ့စရိုက် သာကေတရန်ပွဲ သေနတ် ၂ ချက် ပစ်ဖောက်ခဲ့ဟု ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူများ ပြောကြား
အရှိန်မထိန်းနိုင်သောယာဉ်မှ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီး (၁)ဦးဒဏ်ရာရ
၇ နှစ်အတွင်း ကျောက်မျက် တင်ပို့မှုကနေ ဒေါ်လာ ၁၇ ဘီလီယံကျော် ရရှိ
ကားတင်သွင်းမှုကနေ ကျပ်ငွေ ဘီလီယံ ၉၀၀ ကျော်ရ
မြန်မာနိုင်ငံသဘင်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြကြည် နှုတ်ထွက်ပေးရေးဆန္ဒပြ
ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်း ရှာတွေ့ကြောင်း ဆယ်ယူသူများ ပြောကြား ချက်ကြောင့် စိတ်ဝင်စားမှု မြင့်တက်လာသော်လည်း ဆယ်ယူမည့် နေ့ရက် မသေချာသေး
အသိမ်းခံလယ်မြေများပြန်ရရန် ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူ ၁၀ဦး ခေါ်ယူစစ်ဆေးခံရ
အာရှပစိဖိတ်အလှမယ် မေမြတ်နိုး သရဖူ အသိမ်းခံရ
'မိန်းမရေ... ဒီနေ့ မင်းမွေးနေ့ပွဲကို Suprised လုပ်မယ်ဟေ့'
'ဘယ်လို Suprised လဲ'
'မင်း သူငယ်ချင်းတွေကို ဖိတ်ထားတယ်လေ၊ အဲဒီထဲက တစ်ယောက်ယောက်များ လာတယ်ဆိုရင် ငါ အံ့သြပြီ'
Thein Min Win's status update.
မဟာရန်ကုန် မြို့ ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်း (YUTRA)အတွက် ဂျပန် JICA က စီမံကိန်း အကြိုလေ့လာသုံးသပ်ချက်လုပ်ပြီး အချက်ကြီးကိုးခုကိုပြင်ဆင်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ အကြံပြုထားပါတယ်..။ မီးပွိုင့်တွေ စနစ်တကျမရှိတာ၊ လမ်းပေါ် ဈေးရောင်းတာ၊ ကားတွေစည်းကမ်းမလိုက်နာတွေ..ပေါ့..။ အချက်အားလုံးဟာ အမှန်တွေချည်းပဲဆိုတော့ သိပ်တော့ ပြောစရာမရှိပါဘူး..။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်တွေက ချို့ ယွင်းပျက်စီးနေတာတွေ စည်းကမ်းမရှိတာတွေ အဲဒီလို အပေါ်ယံတွေပဲ သိပြီး အဲဒါတွေဘာလို့ဖြစ်နေသလဲ ဆိုတာကိုသေချာမသိဘူးလို့ထင်ပါတယ်..။
Shwe Eaim Si with ရွှေအိမ်စည်စာကြည့်တိုက် - စာပေဒါနပြုသည်
မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်းဒေသက ကျေးရွာလေးတစ်ရွာမှာ မောင်ပညာဆိုတဲ့ ရေထမ်းသမား လူငယ်လေးတစ်ဦး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးလှတဲ့ သူတို့ရွာမှာ လိုအပ်နေတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းနဲ့ စာသင်ကျောင်း တစ်ကျောင်းကို လူငယ်တွေရဲ့ အင်အားနဲ့ စုပေါင်း တည်ဆောက်နိုင် ခဲ့ကြတယ်။ ကျောင်းဆောက်လုပ် ပြီးစီးတဲ့ အခါမှာလည်း ဝေယျာဝစ္စအတွက် အလုပ်တာဝန်တွေကို ရွာလူငယ်လေးတွေကပဲ ကိုယ်စီ ခွဲဝေယူကြရတာပေါ့နော်။
ပြည်ပရောက်နိုင်ငံသားများက ပြန်ပို့ငွေနှင့် တိုင်းပြည်၏ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ)
August 27, 2014 at 3:24am
ပြည်ပသို့သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကြသော နိုင်ငံသားများကပြန်ပို့သောငွေသည်ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများကို ချမ်း သာစေနိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ မေးစရာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်တော်များများ၌ပြည်ပသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများ က ပြန်ပို့သောငွေသည် အရေးပါသည်။ ယခင်နှစ်ကအိန္ဒိယတွင်နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီများကလာ ရောက် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုထက် သုံးဆအထိ ကြီးမားသောဝင်ငွေကို ရရှိခဲ့သည်။ တာဂျစ်ကစ်စတန်၌ပြည်ပရောက်နိုင်ငံသားများက ပြန်ပို့သောငွေသည် တိုင်းပြည ဝင်ငေ်၏ွ (၄၇)ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်သော တာဂျစ်ကစ်စတန်အမျိုးသား တစ်ဝက်ခန့်သည် ပြည်ပတွင်သွားရောက်အလုပ် လုပ်ကိုင်နေကြသည်ဟု တွက်ဆသည်။ အလားတူပင် ဆိုမာလီယားလူဦးရေ၏ (၄၀)ရာခိုင်နှုန်းသည်ထိုသို့ ဝင်နေပို့ငွေများအပေါ်၌ မှီခိုနေရပြီး အစားအစာနှင့် ဆေးဝါးများဝယ်ယူရန် လိုအပ်သောငွေ ကိုရရှိကြသည်။
မော်ချီး နှင့် ပညာရေးမနက်ဖြန်
ရန်ကုန်တဘက်ကမ်း မြေ ၁ ဧက သိန်းထောင်ချီ ဈေးတက်
တန်ဖိုးနည်းအဆင့်မြင့်အိမ်ရာများ ဖော်ထုတ်ရန် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ စိတ်ဝင်စားလာ
ကျေးရွာအတွင်းမှ အစိုးရတပ်မတော် ဆုတ်ခွာပေးရန် စစ်ပြေးရှောင်များက သမ္မတထံ တောင်းဆို
ပညာရေးဥပဒေကြမ်းဖျက်သိမ်းဖို့တက္ကသိုလ်ကျာင်းသားများ ဆန္ဒပြ (ရုပ်/သံ)
တရုတ်ဇနီးအဖြစ် လူကုန်ကူးခံရသူ ကလေးမိခင်ကို ပြန်ခေါ်ဖို့ မိသားစု လိုလား (ရုပ်/သံ)
၀မ်းတွင်းမြို့နယ် လူခင်းကျေးရွာအုပ်စု ပျားစွဲကျေးရွာမှာ အစာအဆိပ်သင့်
ဖောင်းပြင်မြို့တွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ဆိုင်ခန်း(၁၅)ခန်း ထိခိုက်ပျက်စီး
ရေးမြို့နယ်ဇီးဖြူသောင်ကျေးရွာရဲကင်းမှ ရဲတပ်သားတစ်ဦး မိမိကိုယ်ကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်သေဆုံး
လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ် ဖမ်းမည့် အသေးစိတ်အချက် ထုတ်ပြန်
မလေးရှားထုတ် သတင်းစာတွင်ပါသည့် စက်ရုံမီးရှို့မှု မြန်မာ မပါ
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် မြန်မာအလုပ်သမားများ ကားမီးရှို့မှုကျူးလွန်ဟုဆို
သံလမ်းကူးနေရာ၌ မော်တော်ယာဉ်နှင့် ရထားတို့တိုက်မိ
မြန်မာအမျိုးသမီး ယူ ၁၉ အသင်း တတိယရရှိ
#Digital Camera တစ်လုံးဝယ်ယူရာတွင် သတိပြုသင့်သည့် ...
နိုင်ငံတော်ဗဟိုအဆင့် ပိုစတာပြိုင်ပွဲမှာ ပထမဆုနှစ်ခ...
ပြည်ပရောက်နိုင်ငံသားများက ပြန်ပို့ငွေနှင့် တိုင်ြး...
#ယောင်္ကျားလေးများ ရေတိမ်မနစ်စေဖို့ ........ဆောင်ရန်...
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဘီလီယံချီကုန်ကျနိုင်သည့် ရန်ကုန်ဘူတာ...
ပြည်ပအကူအညီနှင့် စီးပွားရေးတိုးတက်မှု ခင်မောင်ညို ...
"သီချင်းတွေမှာ သမိုင်းရှိတယ် ..."
သော့ခတ်နည်းပညာသစ်နဲ့ ခတ်ထားပြီး စက်ဘီးသူခိုး, ခိုး...
“အညံ့တကာ့ ထိပ်ခေါင်ဒင်” (မင်းဒင်)
ဘုရားစေတီအချို့ ရှေ့က မနုသီဟ ဖင်နှစ်ခွ အကြောင်းသိေ...
<<<< သတိရတယ် ပူစီလေး >>>>
တရုတ် အတွေးအခေါ်ပညာရှင် Laozi ပြောတဲ့ လူသုံးမျိုး
အမေရိကား အတွေ့အကြုံ (၃)
နှစ်ပေါင်း ၁၃၀ တိုင်လုပြီမို့
ကမ္ဘာ သင်္ချာအတော်ဆုံးလူသား ဖြစ်လာတဲ့ အီရန် အမျိုးသမီ...
ဓမ္မစေတီမင်း ၊ ငဇင်ကာ နှင့် ခေါင်းလောင်းတော်
အမေရိကား အတွေ့အကြုံ (၂)
ရှေးမြန်မာမင်းများ၏ ခေါင်းဆောင်မှု အရည်အသွေးကို လေ့...